Ny Andraikitry ny Mgr OMAR tamin'ny fanonganam-panjakana
2009-10-02 @ 15:52 in Politika
Fanamarihana voalohany: Ny hoe OMAR dia fanafohezana ny anarany manontolo manao hoe Odon Marie Arsène Razanakolona. Ity sombin-gazety asehoko anareo ity dia tao amin'ny gazety Taratra tamin'ny talata 29 septambra lasa teo. Nanaitra ahy io lahatsoratra io satria hafa mihitsy ny fandraisako azy ary heveriko ho sopapa nomen'ny mpanao gazety ny mpamaky azy ny hafatra ampitainy.
Amiko tsy famahana krizy no tena nihaonan'ny roa tonta ny alatsinainy fa fitadiavan-kevitra amin'izay hanohizan-dry zareo ny tolona. Tsy miasa hamaha ny olana velively ny Mgr OMAR fa mametraka kosa ny teti-panorony. Vakio ary fa herintaona katroka nialoha ny fanonganam- panjakana, izany hoe ny 17 marsa 2008, dia nandray ny mpanao politika nankahala an-dRavalomanana tao amin'ny birao fiasany tao amin'ny Katediraly ny Mgr OMAR. Tsy nisy nipika ny resaka nifanaovana. Nitohy indray izany fandraisana ny mpanao politika izany ny 23 septambra 2008.
Lasa lavitra avy hatrany ny saina mieritreritra fa nanomana ny fanonganam-panjakana ry zareo nandritra ireo fotoana ireo. Ny eritreritra nolasa fa tsy midika avy hatrany hoe izany tokoa no izy an! Efa vita tsara sy voaomana ny tetika rehetra. Noho izany, azo heverina fa naniraka ny lefiny hankeny Andoharanofotsy (tranon'i Alain Ramaroson) tokoa ny Mgr OMAR tamin'ny voalohan'ny taona 2009, raha nahatsiaro ianareo fa tonga saina tampoka izy sao tratra ny tetika dia mody nandà ny nanirahany ny lefiny. Manome hafatra ho an'ny mpino katolika ihany koa anefa iny toe-javatra iny hoe miomàna hitolona fa nahazo tso-drano avy amiko ireto mpitolona ireto. Asa ahoana ny hevitrareo?
jentilisa 02 oktobra 2009 amin'ny 17:55
PS: Nisy malagasy avy teto Madagasikara nanatrika ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana faha-64 tany New York farany teo, tsy voatosi-boho-tanana fa nanaraka ihany koa ny fivoriamben'ny G20 na Goavana20. Araho ato ny sary sy ny lahatsary tamin'izay hitany raha mahaliana anao.